कोरोनाबाट गर्भवती कति असुरक्षित? ५ प्रश्न र उत्तर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोनाबाट गर्भवती कति असुरक्षित? ५ प्रश्न र उत्तर
स्वास्थ्यखबर बुधबार, चैत ५, २०७६, १०:३०:००
डा राजन शाह
गर्भावस्था आफैंमा आमा र उनको परिवारको लागि एक उपहार र अमूल्य खुसियालीको पल हो। तर, कोभिड–१९ को महामारीका कारण यो पल अत्यन्तै तनावपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। यस्तो समयमा मनमा अनेकौं प्रश्नहरु र नकारात्मक सोचहरु आइरहेका हुन्छन्।
पछिल्लो कोरोना भाइरसका कारण गर्भवतीमा निम्तिएको तनाव कम गर्न के गर्नुपर्ला? यो लेख मार्फत यस विषयमा उठेका जिज्ञासा मेटाउने जमर्को गरिएको छ।
प्रश्न १ : के गर्भवती महिलालाई संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ?
उत्तर : सामान्यतया गर्भवती महिलामा इम्नोलोजिकल र शारीरिक परिवर्तनहरु आँउछन्, जसले उनीहरुलाई संक्रमणप्रति बढी संवेदनशील बनाउँछ।
गर्भवतीमा कोभिड– १९ को जोखिम अरु बिरामीलाई भन्दा बढी देखिएको छैन। धेरैजसो महिलाले केवल साधारण फ्लुका लक्षणहरु मात्रै अनुभव गरेका छन्। गर्भवतीमा हाल कोभिड–१९ ले गर्दा कुनै मृत्यु भएको तथ्याङ्क छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार, १४७ जना संक्रमित गर्भवतीमध्ये केवल ८ प्रतिशतमा गम्भीर लक्षण भेटिए र केवल १ प्रतिशत सिकिस्त बिरामी परेको भेटिए। एउटा बिरामीमा मात्र मेकानिकल भेन्टिलेसन चाहियो जसमा सिजेरियन सेक्सन गरेपछि उनको अवस्थामा सुधार आयो।
प्रश्न २ : के कोभिड–१९ गर्भवतीबाट गर्भमा रहेको बच्चामा सर्न सक्छ?
उत्तरः एउटा केस शृंखलाले कोभिड–१९ संक्रमित आमाहरुबाट एमनिओटिक फ्ल्युड, कर्ड रगत, नवजात शिशुको घाँटीको स्वाभ र आमाको दूधको परीक्षण गरियो र सबै नमुना भाइरसको लागि नेगेटिभ आएको थियो।
ल्यान्सेटको अध्ययनले ९ जना गर्भवतीका बच्चामा भाइरसको कुनै प्रमाण फेला पारेन तर, गत शनिबार मार्च १४ मा बेलायतमा नवजात शिशुमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखायो। यो जाँच बच्चा जन्मेको केही मिनेटमै गरिएको थियो।
प्रश्न ३ : के कोभिड–१९ ले गर्भपतन वा जन्मजातमा विसंगति गराउन सक्छ?
उत्तर : वर्तमानमा कुनै तथ्यांकले पनि बढेको जोखिम देखाएको छैन। अझ सार्स महामारीको आँकडाले पनि भ्रुण क्षति र जन्मजातमा कुनै विसंगति देखाएको थिएन। यद्यपि गर्भावस्थाको सुरुमा ज्वरो, केही वनावटी खराबीसँग सम्बन्धित हुनसक्छ।
प्रश्न ४ : के कोभिड–१९ बाट संक्रमित महिलाको समय पुग्नुभन्दा पहिला बच्चा जन्मिन सक्छ?
उत्तर : कोभिड–१९ संक्रमित महिलामा समयभन्दा पहिले बच्चा जन्मिएको देखिएको छ। यद्यपि यो संक्रमणसँग सम्बन्धित हो या होइन अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। अरु कोरोनाको संक्रमण जस्तै सार्स र मर्सका समयमा गर्भावस्थामा समयभन्दा पहिले जन्मिने र थोरै तौलका बच्चा जन्मिएका थिए।
प्रश्न ५ : के कोभिड–१९ बाट संक्रमित महिलाले स्तनपान गर्न मिल्छ?
उत्तर : ६ वटा चिनियाँ केसहरुमा, आमाको दूधमा कोभिड–१९ को परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखियो। स्तनपानको मुख्य जोखिम आमाबाट संक्रमित श्वासबाट हुने गर्छ। वर्तमान प्रमाणको आधारमा यो सल्लाह दिइन्छ कि, स्तनपान गराउँदा हुने फाइदा भन्दा स्तनपानको माध्यमबाट हुने संक्रमणको जोखिम न्यून रहेको छ। तर स्तनपानका समयमा संक्रमण सर्नबाट बच्न सबै सम्भावित सावधानीहरु अपनाउनु पर्छ।
- (डा शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन्)
बिपी प्रतिष्ठानका आन्दोलनरत पक्षले दिए ७२ घण्टे अल्टिमेटम, बुधबारदेखि सेवा बहिस्कार गर्ने घोषणा
के सन्चो दलिएको मास्क लगाउँदा रुघा लाग्दैन भन्ने कुरा सही हो? होइन। सञ्चो दलिएको वा कुनै पर्फ्यूम वा बडी स्प्रे लगाइएको मास्क लगाउँदा त्यसले रुघा लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकरुपमा पुष्टि भएको छैन। प्रयोग गरिने मास्क सुख्खा र सफा हुनुपर्दछ शुक्रबार, साउन १५, २०७८
‘डेल्टा भेरिएन्ट’ फैलिँने क्रममा निरन्तरता, चीनमा थप ५५ व्यक्तिमा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि २९ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट एकै परिवारका तीनको मृत्यु, गाउँ सिल ४६ मिनेट पहिले
यी हुन् बारबरा फाउन्डेसन कोभिड-१९ विशिष्ट सम्मान पाउनेहरु ११ घण्टा पहिले